Qaniinyada Shinnida. Gaaldiid
Bogga Hore > Causes > Qaniinyada Shinnida.
1 Qaniinyada Shinnida:
1.1 Maxaan sameeyaa:
Qaniinyada Shinida waxay keeni kartaa xasaasiyad daran iyo kaar gaar ahaan goobta ay jirka ka qaniinto shinnidu. Muddo yar kadib boogtii way casaan/guudnaan oo barari kadibna waxay bilaabaysaa inay ku cuncunto ama afeefato. Inta badan qaniinyadu ma aha mid halis ah.
Maalinta hore ee qaniinyada shinnida, waxay bilaabmaya barar wata kaar. Inkasta oo qaniinyadu halis ahayn hadana ka war dhawr dadka.
Haddii shinnidu ku qaniinto waxay ku reebtaa goobta ay qaniintay micideeda oo laga yaabo inay sumaysantahay, markaa sida ugu dhakhsaha badan micida ka saar adoo adeegsanaya cidiyahaaga ama shay kale oo soo saari kara micida.
Qabooji goobta la qaniinay, adoo isticmaalaya maro ama baraf.
Haddii ay ku cuncunayso ama ay afeefanayso waxaad marisaa kariim qoyan, tusaale Xylocain iyo kariimyada hydrocortisone. Kala tasho dhakhtarkaaga intaanad marin Xylocain Ilamo ka yar da’diisu 18 bilood.
Ka ilaali inay caabuqdo nabarku adoo ku duubaya balastar.